Dhaabbanni Boeing Sooftiweerri xiyyaarota moodeelii Boing 737 Max rakkina qabaachuu amane
on 04/05/2019 at 11:40 pm
aslmulaaykum worahamatulah wobarkatulahu jiraa jirtu qophesitoota radiyoo N/h nageenyi fi rahamni rabbii olta’ee isiin irra jariitu. inshaa allah yo rabbiin fedhe anis sagaantaman tuni nati tolaan garee kan seenun fedhe na hayamaama yon baleeses na hofkalcha barkalufikum.
Xiyyaarri Boeing 737 Max 8 osoo Finfinnee irraa gara Keeniyaatti imalaa jiru naannawa Bishooftuutti kufee caccabuun lubbuun nama 157 darbuun ni yaadatama. Balaa kana hordofuun biyyoonni addunyaa heddu xiyyaaronni moodeelii Boing 737 Max tahan rakkina bu’uuraa qabachuu malan shakkii jedhuun tajaajila kan dhaabsisan yoo tahu, gabaasni jalqabaa qorannoon balaa xiyyaara ityoophiyaa irra gaheetis shakkii kana kan jabeessu tahee jira.
Minsteerri Traanispoortii Ityoophiyaa Aadde Daagmaawit Makonnin sababa ka’umsa balaa xiyyaara Daandii Qilleensaa Ityoophiyaa Boeing 737 Max 8 kufee caccabe ilaalchisee gabaasa duraa kaleessa kan ibsite yoo tahu, xiyyaarichi imalaaf osoo hin ka’iniin dura rakkoo tokkollee kan hin qabne akka tureefi, ka’umsi isaas kallattii sirrii kan hordofe ta’uu beeksiste.
Kanuma hordofuun hojii gaggeessaan ol aanaa dhaabbata Boeing Deenis Mulanberg, balaa Xiyyaaraa dhiheenya Ityoophiyaatti muudatee fi kan baatii shan dura Indoneezhiyatti muudateen namoota du’aniif gadda guddatu nutti dhaga’ame jedhe. Dabalataanis balaan akkanaa lammata xiyyaarota Boeing’n akka hin uumamneef dhaabbanni isaa rakkoo kana adda baasuun, sooftiweerii sababa balaa kanaatiin wal qabatu fooyyessaa jiraachuu ibse.
Mr Deenis Mulanberg ibsa isaa kanaan “gaddi nutti dhaga’ame baay’ee cimaa fi miira keenya kan tuqe ta’us, rakkoo kana hiiknee xiyyaarri keenya haala amansiisaa taheen gara tajaajilaatti akka deebi’u ni hojjenna” jedhe.